HORDHAC: Man United Vs Chelsea- Red Devils Oo Doonaysa In Ay Ceebta Ka Soo Dhex Baxdo Iyo Saamaynta Wayn Ee Uu Kulankan Ku Yeelan Karo Rajada Kaalmaha Sare Ee Blues & Red Devils. | Burconews
April 28, 2019 - Written by ilyas haruun
Burconews.net:- Manchester United ayaa Old Trafford ku soo dhawaynaysa kooxda ay kaalmaha sare ku tartamayaan ee Chelsea, waxayna United kulankan ciyaaraysaa iyada oo 7 guuldaro soo gaadheen 9 kii kulan ee ugu danbayay tartamada oo dhan isla markaana ay wali la sii jaho wareersan tahay guuldarooyinkii xidhiidhka ahaa ee premier League kaga soo gaadhay Everton iyo Man City.
Waxaa la aaminsan yahay in guuldaro kale oo Man United ka soo gaadha Chelsea ay si buuxda u dili doonto rajada yar ee ay Red Devils ka qabto in ay kaalinta afraad ku soo baxdo laakiin Chelsea lafteeda ayaa og in ay halis wayn gali doonto haddii ay saddexda dhicbood ku soo lumiso Old Trafford.
Kooxaha Tottenham iyo Arsenal ayaa si fiican isha ugu haya kulanka Old Trafford maadaama oo uu iyaga laftooda saamayn ku yeelan karo. Kooxaha Tottenham, Man United, Chelsea iyo Arsenal ayaa u muuqdo kuwo dhamaantood si xun ugu dhibtoonaya in ay fursadaha horyaala ka faa’iidaystaan.
Kulanka Old Trafford waa mid saamayntiisa ku yeelan kara kaalmaha saddexaad iyo afraad ee Premier league nooc kasta oo ay noqon doonto natiijada ka soo baxdaa.
Chelsea oo mar ahayd kooxda ugu rajada xumayd afarta kooxood ee kaalmaha sare ku tartamaya ayaa hadda haysata fursada ay kaalinta saddexaad ugala bixi karto Tottenham haddii ay Old Trafford guul kaga soo gaadhaan Man United.
Tottenham ayaa kaalinta saddexaad ugu jirta 70 dhibcood waxayna ciyaartay 36 kulan taas oo la micno ah in ay laba kulan oo kaliyi baaqi u yihiin laakiin Chelsea oo 35 kulan ciyaartay ayaa Tottenham ka hoosaysa saddex dhibcood oo kaliya waxayna Blues kaalinta saddexaad ugu fadhiisan kartaa farqiga goolasha haddii ay United guul ka gaadhaan.
Haddii ay Man United guulaysato waxay Chelsea la wadaagi doontaa 67 dhibcood waxayna min 3 dhibcood u jiri karaan Tottenham halka haddii ay Arsenal guulaysato ay yeelan kartoi 69 dhibcood waana arin muujinaysa in kaalinta saddexaad iyo afraad ay u furan yihiin afartan kooxoodba.
Wararka Labada Kooxood Ee Ka Hor Kulankan.
Tababare Solskjaer ayaan wax walwal dhaawacyo ah qabin laakiin walalkiisa ugu wayn ayaa ah qaab ciyaareedka liita ee ay ciyaartoyda kooxdiisu ku jiraan waxaana la filayaa in uu shaxdiisa dib ugu soo celin karo Nemanja Matic oo kulankii Man City kaydka la dhigay.
Antonio Valencia ayaa ka sii maqnaan doona Unnited laakiin waxa uu sidoo kale shaki ku jiraa taam ahaansha buuxa ee Phil Jones , Ander Herrera, Eric Bailly iyo Scott McTominay kuwaas oo uu Solskjaer hubin doono haddii ay taam u noqon karaan kulanka Chelsea.
Dhinaca kooxda Maurizio Sarri ee Chelsea waxaa dhaawacyo kaga maqan Callum Hudson-Odoi oo inta xili ciyaareedkan ka hadhsan dhaawac ku seegaya waxa kale oo dhaawacyo ku maqan Marco van Ginkel iyo Ethan Ampadu.
Dhinaca kale Sarrri ayaa hubin doona taam ahaansha buuxa ee N’Golo Kante oo kulankii ugu danbeeyay waqtigii nasashada dhaawac loo saaray waxa kale oo uu shaki ku jiraa taam ahaansha buuxa ee Willian, Antoni Rudiger iyo Marcos Alonso.
Tartanka: Kulanka 36 aad ee Premier leageu
Waqtiga: 6:30 Maqribnimo Ee Saacada Geeska Afrika